Joe Achuzia: Ihe ị na-amaghị maka 'dike Biafra' - BBC News Ìgbò
Joe Achuzia: Ihe ị na-amaghị maka 'dike Biafra'
28 Febụwarị 2018
Joe Achuzia bụ onye ndi Igbo na-ahụ ka dike n'agha maka ike ọ kpara n'agha Biafra. Ụnyaahụ ka Achuzia lara mmụọ n'afọ 90.
Achuzia bụ onye Asaba a ma ka onye na adịghị atu egwu, a makwa ya maka etu o siri duo ndị agha Biafra na nchekwa ọnicha n'oge agha.
Dọkịta egbuola nwaanyị otele ukwu gbalaga
N'agbanyeghị na Achuzia sepụrụ aka ka onye agha, ọ tinyere ọnụ n'ihe gbasara Biafra.
Ebe foto si, Evening Standard
Na nkata ya na ndị ọrụ ntaakụkọ Sun nwere n'ọnwa May 2016, Achuzia sị n'onwere mgbe ha bụ ndị Biafra chiliri aka elu, maka ya bụrụ na ya chinyiri aka elu ọ ga-enwe akwụkwọ edere banyere ihe a. "Ke ebe akwụkwọ ha dị," Achuzia jụrụ ndị ntaakụkọ Sun.
Lee ụfọdụ ihe ndị ọzọ ị kwesịrị ịma maka Joe Achuzia:
O nwetara aha otutu ya bụ "Hannibal" na "Air Raid" mgbe a na-alụ agha Biafra
Achuzia nwetere ọzụzụ a na-akpọ 'Aeronautic engineer' n'ala Bekee
O rụrụ ka onyeisi ode akwụkwọ otu Ohanaeze Ndigbo
Achuzia kwuru na Naịjirịa enwetebeghị ụzọ ọ ga esi gaa n'ihu kamgbe ndị agha batara n'ọchichi na 1966
Ọ sị na ndị agha wetara ọdịrị ọchịchị na-emegbu ndị a na-achị
Achuzia kwuru maka mkpamkpa ndị ọchị ehi na-akpa bụ ihe ha ji chọọ ịnata ndị mmadụ ala ha
N'uche Achuzia, agha Biafra ebighị maka ọ si na gọọmenti Naịjịrịa emebeghị ihe akpọrọ '3 Rs'
Achuzia dere akwụkwọ maka Biafra nke akpọrọ 'Requiem Biafra'.
BBC Igbo gbara otu onye lụrụ agha Biafra bụ Mejọ Foster Mbaekwe, ajụjụ ọnụ, o kwuru sị na ọ lụghị ọgụ n'okpuru Achuzia, kama na Achuzia bụ kọmanda siri ezigbo ike, onye a na-akwanyere ugwu ọfụma ma bụrụkwa onye rụpụtara ihe a hụrụ anya.
Ihe Okey Ndibe kwuru maka Biafra
Mbaekwe kwuru n'otu njirimara ndị mmadụ ji echeta Achuzia gbasara agha Biafra bụ mkpamkpa ọ kpara ịgba ụgbọala ndị agha Naịjirịa ọkụ n'Abagana, bụ 'ihe atụghịanya' n'ọbụghị ike aka Achuzia ka-esi chere.
"Otu nkem bụ 7th battalion, anyị cheere ha na Nkpor tupu ihe ahụ emee n'Abagana, ya mere onye ọbụla ebunyela ya ebube ahụ."
"Ya na ụfọdụ ndị isi ndị agha esighị otu ụzọ gaa. Ụzọ ya amasịghị ha maka na ọ gbara ndị agha ndị ọ kpọrọ ndị 'oke ụjọ' egbe.
Ị ma na ọ bụghị onye agha azụrụ azụ, ọ batara dịka onye nkịtị, mana obi kara ya."
Ọ bụghị onye agha Naịjirịa tupu ọ banye n'agha Biafra."
Nwamba ọ bụ amusu n'ezie?
NA EME UGBU A Ọkụ agbaghị n'Aso Rock - Ụlọọrụ onyeisiala Naịjirịa
Gịnị na-esere Femi Fani-Kayode na nwunye ya, Precious Chikwendu?